Matoorrada korantada - Ikkaro
Waa aalad wareega oo isbeddeleysa korantada en tamarta farsamada.
Halkan waxaan ku arki doonaa sida ay u shaqeeyaan iyo sida loo dhiso, laga bilaabo matoorada fudud ilaa kuwa ka adag
ka 775 matoorro waa matoorro hadda socda loo adeegsaday mashaariic badan iyo waxaan u maleynayaa inay dadka aad u yaqaanaan.
Markii aan ka hadlayno noocyada matoorada, 775-ka waxaa loola jeedaa cabirka matoorka oo caadi ah. Sidan ayaan ku heli karnaa 775 oo ay soo saareen noocyo kala duwan, oo leh kala duwanaansho hawleedyo kala duwan iyo awood kala duwan, oo leh 1 set oo saa'ido ah ama leh labo. Laakiin waxa qof walba ixtiraamo waa cabirka mishiinka.
Matoorrada korantada waxay hagaajinayaan xakamaynta iyo ilaalinteeda
Ku dhowaad sanad ka hor, waxaan tixraacnay maktabadda 'Scheneider Electric Digital'. Xaaladdan oo kale waan ku lifaaqeynaa si aad ... Akhri akhriska
Sida loo sameeyo Curie Magnetic Motor
Thanks to talooyin ka yimid Tao of physics, Waan ogahay ka Gawaarida Saamaynta Manetic.
Matoorku wuxuu ku saleysan yahay hanti maaddooyin ferromagnetic ah oo uu daahfuray Pierre Curie, taas oo ah in heerkul gaar ah ka dib ay maaddadu lumiyaan birlabnimada oo aysan mar dambe soo jiidanayn magnets.
El Mendocino Mashiinka waa a mashiinka korantada in si magnetik ah u soocdo una isticmaalo tamarta qoraxda. Quruxda matoorku waxay daawaneysaa asaga oo ordaya inta uu hawada dul sabeynayo. Runtii waxay u egtahay sixir.
Waxaa loo sameeyay laba qaybood oo kala duwan, habka magnetka ee ka dhigaya inuu levitate iyo qaybta korantada ee korantada ee ka dhigaysa inuu wareego.Mootada waxay ka kooban tahay afar waji (qayb laba jibbaaran) oo ku wareegsan dhidibka, oo sameeya rotor. Qalabka rotor-ku wuxuu leeyahay laba qaybood oo xarig ah iyo unug qorraxda ku dhegan dhinac kasta. Usheeda dhexe waa mid jiifsan oo birlab ku leh meel kasta oo dhamaadka ah.
Hawlgalka aragtiyeed ee matoorrada korantada iyo koronto-dhaliyeyaasha
Kadib maqaalkii ugu dambeeyay ee ku saabsanaa dhismaha hal waji oo beddelaya matoor hadda jira, waxaan ku arkay wax aad u xiiso badan inaan xirto ... Akhri akhriska
Dhis mashiinka AC
Waxaan ka helay degel ay ku muujiyaan sida loo dhiso hal waji fudud. Waxay u muuqataa inay muhiim tahay in la xoojiyo in kaliya ay la shaqeyneyso hal waji.
Mashiinka waxaa lagu sameeyay waxyaabo si fudud loo heli karo loona horumarin karo motor laga bilaabo saldhigyada teori ee korantada iyo kuwa matoorrada korantada.
Waxaan xasuustaa markii aan bilaabay kulleejada barto mashiinnada korantada, waxay bilaabeen inay na bartaan a halbeegga halbeegga ugu habboon. Halkanna laga bilaabo, way sii horumariyeen ilaa ay ka helayeen dhammaan matoorada oo dhan, laakiin had iyo jeer waxay ku saleysan yihiin mabaadi'da isku mid ah.
Dhisida mooto fudud oo isku mid ah
Halkan waxaan ku aragnaa sida loo dhiso mootada isku xigxiga oo eber ah, oo leh kaliya batteri, gabal silig iyo magnet The… Akhri akhriska